We Fight We Win. -- " More than Media ": စက်ဆန်းပေါက်ကွဲ မီးလှောင်မှု သတင်း
စက်ဆန်းပေါက်ကွဲ မီးလှောင်မှု သတင်း
လူ၁၇ဦးသေဆုံးပြီး ၁၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂိုလ်ထောင်ထဲမှာ
လောင်စာတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတယ်။ လောင်စာတွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ အာဏာရစစ်အုပ်စုထဲက
လူကြီး တွေပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့ ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်မှုကို ငြိမ်းသတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့မီးသတ် ၆ ဦးသေဆုံးတယ်။ ဒီဂိုလ်ထောင်ကစစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင် က ပိုင်တဲ့ဂိုလ်ထောင်တွေဖြစ်တယ်။ ပေါက်ကွဲမှုက
အလွန်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်။ အခုထိ မီးလောင်နေတုံးဖြစ်တယ်။ ၀ါယာ ရှော့ ဖြစ်ရာကနေ စတင်လောင်ကျွမ်းတာလို့ သိရတယ်။
နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုပျက်အောင် ကိုမိုးသီးတို့က အများဆုံး သွေးထိုးလှုံဆော်နေကျမဟုတ်ဘူးလား.
28 December 2011 at 15:49
This was responsible for KNU, KIA and the other ethnic groups.
They might have done it for the new Myanmar government's false.
The new government won't do it as it is welcome by every country and makes many changes.Shame on the ethnic groups.
28 December 2011 at 21:10